इन्स्टाग्राममा अब साथीसँगै लाइभ गर्न सकिने - Khabarsansar.com
इन्स्टाग्राममा अब साथीसँगै लाइभ गर्न सकिने
चर्चित फोटोब्लगिङ वेबसाइट तथा एप इन्स्टाग्रामले लाइभ स्ट्रिमिङ फिचर सुरुवात गरेको अझै एकवर्ष पुगिसकेको छैन । यसबीचमा कम्पनीले लाइभ फिचरलाई धेरैपटक अपडेट गरिसकेको छ । गत जुन महिनामा उसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो लाइभ भिडियोपछि शेभ गरेर २४ घन्टाभित्रमा शेयर गर्नसक्ने फिचर उपलब्ध गराएको थियो । र, अहिले फेरि इन्स्टाग्रामले एक कदम अघि बढ्दै प्रयोगकर्ताले आफ्ना साथीहरुसँग सँगै लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्ने फिचर थप गरेको छ ।
यस फिचरको नाम न्यष्लन ीष्खभ धष्तज ब ाचष्भलम रहेको छ । यो फिचर एन्ड्रोइड तथा आइओएसमा इन्स्टाग्राम एपको भर्सन २० मा रहेको छ । एप स्टोरमा इन्स्टाग्रामको यो अपडेट भर्सन उपलब्ध छ ।
इन्स्टाग्रामले एक ब्लगमार्फत यस फिचरका बारेमा प्रष्ट पार्दै लेखेको छस् लाइभ भिडियोको सहयोगले तपाइँ बिल्कुलै नयाँ तरिकाले सामाग्रीहरु शेयर गर्न सक्नुहुनेछ । अब आफ्नो लाइभ ब्रोडकास्टमा कुनैपनि गेष्टलाई जोड्न सहज हुनेछ । दायाँतर्फ तल रहेको आइकन ट्याप गर्नुहोस् र भिडियो हेरिरहेको कुनैपनि व्यक्तिलाई इन्भाइट गर्नुहोस् । प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा लाइभ स्ट्रिमिङ सुरु गरेसँगै उक्त लाइभ हेरिरहेका कुनैपनि दर्शकलाई लाइभमा जोडिन निम्तो पठाउन सक्नेछन् । ती व्यक्तिले निम्तो स्विकार गरेसँगै स्क्रिन दुई भागमा विभाजन हुनेछ र साथीको लाइभ स्क्रिनको अर्को हिस्सामा सुरु हुनेछ ।
प्रयोगकर्ताले कुनैपनि समयमा आफ्नो गेष्टलाई हटाउन सक्नेछन् र अर्को व्यक्तिलाई जोड्न सक्नेछन् । साथै आफैपनि लाइभ प्रशारणबाट बाहिरिन सक्नेछन् । लाइभ सकिएसँगै आफ्नो लाइभ भिडियोलाई स्टोरीमा पनि शेयर गर्न सकिनेछ । लाइभ भिडियोलाई पछि शेयर गर्न नचाहेमा शेयर नगर्ने विकल्प पनि रहनेछ । एजेन्सी
भोजपुरमा प्रदेश स्तरिय नृत्यकर्मी संघ गठन
यी हुन् तरकारीवाली कुशुम अभिनित ‘लम्फु’ का गीत
प्रचारमा व्यस्त शिल्पा पोखरेल
यस्तो छ सुष्मा कार्की रेट , ५ मिनेटको ३ लाख , एक घण्टाको कती ?
मलेशियामा नेपाली गितको छायांकन गरिदै
हजार चोटि तिमिलाइ मैले बोलाए
१९ हजार कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
राजेन्द्र खड्गीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो
राष्ट्रिय सभामा वाम गठबन्धनको बहुमत, कुन दलले कति सिट जिते ?
भैरवनाथ गणभित्र बम विस्फोट…